आखिर अमेरिका जान कोलाई मान हुदैन होलार त्यसमा पनि बिना मिहनत गरेर , हो अब अमेरिका जना यो बर्समा पाइनेभायो DV परेर! यो जानकारी अमेरिकी सरकारको DV बेवस्थापन वेबसैट www.dvlottery.state.gov ले जनाएको छ ! तपाइलाई थपजनाकारी चाहिए यो www.dvlottery.state.gov अमेरिकी सरकारको DV बेवस्थापन वेबसैट मा गएर हेरन अनि बुजनसक्नु हुनेछ !
अर्को कुरा २०१९ देखि अब नया DV नखुल्ने पनि अमेरिकी आधिकारी हरुले जनाएका छन ! यो बर्समा जति जनालाई पर्छ उनि हरुलाई अमेरिका गएर कुनै समस्या नहुने पहिलाको DV परेर जाने हरु जस्तै सुबिधा हुने पनि अमेरिकी आधिकारी हरुले जनाएका छन ! मे 2nd मा खुल्दैछ ! तपाई हरु लाई जो जसको DV पर्छ धरै धरै सुवकामाना पनि ब्यक्त गर्दछौ र अमेरिका गएर आथिक लव भईसकेपछि नेपाल फर्किन पनि आनुरोध गर्दछौ!
अमेरिकन अमबिसीका अनुसार पढ्न जाने विजा मा कुनै रोक नभएको र पहिला को अवस्था मानई विजा लगिरएको बताएका छन ! थपजनाकारीका लागि अमेरिकन अमबिसीको फेसबुक पेज मा पढ्न सक्नुहुनेछ यो लिंक मा जानुहोला